ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လား ? အပျော်တမ်းသမားလား ? – Gentleman Magazine
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လား ? အပျော်တမ်းသမားလား ?
သင့်ကို အောင်မြင်စေဖို့ လှုံ့ဆော်မှုက ဘာလဲ။ လူတိုင်းက ကျရှုံးမှုကို သဘောမကျပါဘူး။ လူတိုင်း အနိုင်လိုချင်ကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ လစ်လျူရှု ခံရမယ်။ သင့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ အလကားဖြစ်သွားမယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဆိုရင် သင့်ရွေးချယ်မှုက အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မယ့် အခိုက်အတန့်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်က ရောင်းမထွက်ခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းတွေက စိတ်မ၀င်စားတာဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ သင့်အနေနဲ့ ရွေးချယ်ရတော့မှာပါ။ ဒီလို ငြင်းပယ်ခံရတာက သင့်ကိုပြိုလဲသွားစေမှာလား ဒါမှမဟုတ် ဒီအရှုံးကနေ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရယူပြီး အောင်မြင်သည်အထိ ကြိုးစာမှာလား။ တစ်ခုခုကိုတော့ ရွေးချယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင် ကျရှုံးခဲ့ရပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးပြီး ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ တကယ့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖြစ်လာတာပါပဲ။ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ ဒီလိုအခိုက်အတန့်ကို ဖြတ်ကျော်ရပါတယ်။ ငြင်းပယ်ခံရမှုဟာ လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ရမယ့် အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအခိုက်အတန့်ကပဲ သင့်ကိုယ်သင် တကယ့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လား အပျော်တမ်းသမားလားဆိုတာကို ကွဲပြားခြားနားသွားစေမှာပါ။
သင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲမယ့်သူ မရှိဘူးဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မလား၊ လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတွေ စ မေးမလား ရွေးချယ်ဆုံဖြတ်ရတော့မှာပါ။ သင့်ရဲ့ ဈေးနှုန်းက အဆင်မပြေနေတာလား၊ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံက ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ဖော်ပြနိုင်စွမ်း မရှိတာလား စတဲ့ သင့်တော်မယ့်မေးခွန်းတွေနဲ့ အခြားဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတာကို လက်လီသမားတွေ၊ ၀ယ်ယူသုံးစွဲမယ့်သူတွေကို မေးမြန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်တွေက တကယ့်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကို ရအောင်ယူနိုင်ရပါမယ်။ ဒါမှသာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မှာပါ။
သင့်အနေနဲ့ အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ ဒါမှမဟုတ် တွဲဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို မဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို အဖြေရှာရမှာပါ။ သင် ဘာတွေမှားသွားလဲ။ သင် မအောင်မြင်ရတဲ့နောက်ကွယ်မှာ အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိနေမှာ သေချာပါတယ်။ သင့်ရဲ့ တင်ပြမှုက ကြာလွန်းသွားတာလား၊ သင့်စိတ်ကူးကို တင်ပြပုံမမှန်လို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် မှန်ကန်တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူကို မတွေ့လို့လား စတာတွေကို ထိုင်ပြီး သုံးသပ်ရမှာပါ။ ပြီးမှ လိုအပ်တဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အငြင်းခံရမှုကြောင့် လက်လျှော့အရှုံးမပေးဘူးဆိုရင် သင်က ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါပြီ။ ဒီအချက်က တကယ်ကို ရိုးရှင်းပါတယ်။ အငြင်းခံရတာကို လက်ခံပါ။ သင့်ကိုယ်သင်ရော အခြားလူတွေကိုပါ ဘာကြောင့် ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ အများကြီးမေးပါ။ စဉ်းစားပါ။ ပြီးရင် လမ်းကြောင်းသစ် ချမှတ်ပါ။ ဒီလောက်ဆို ရပါပြီ။ လုပ်နိုင်မှာပါ။
အောင်မြင်သူတိုင်းလောက်နီးပါဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွားရှုံးနိမ့်မှုတွေ ကြုံခဲ့ဖူးပြီး ဒီအရှုံးကိုပဲ ဆုတံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် လက်ခံနိုင်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရှုံးမှုနဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ဒွန်တွဲနေတတ်ပါတယ်။ တဖက်သတ်အောင်မြင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ မရှိပါဘူး
ဒီတော့ အငြင်းခံရတာက သင့်ကိုကျရှုံးစေရမှာလား စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရစေမှာလား သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။
ကြှမျးကငျြပညာရှငျလား ? အပြျောတမျးသမားလား ?
သငျ့ကို အောငျမွငျစဖေို့ လှုံ့ဆျောမှုက ဘာလဲ။ လူတိုငျးက ကရြှုံးမှုကို သဘောမကပြါဘူး။ လူတိုငျး အနိုငျလိုခငျြကွပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ လဈလြူရှု ခံရမယျ။ သငျ့ရဲ့ကွိုးစားအားထုတျမှုတှေ အလကားဖွဈသှားမယျ။ သငျကိုယျတိုငျလညျး ဘာလုပျရမှနျးမသိတော့ဘူးဆိုရငျ သငျ့ရှေးခယျြမှုက အဆုံးအဖွတျပေးနိုငျမယျ့ အခိုကျအတနျ့ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ထုတျကုနျက ရောငျးမထှကျခဲ့ရငျ ဒါမှမဟုတျ ရငျးနှီးမွုပျနှံသူတှေ၊ မိတျဖကျလုပျငနျးတှကေ စိတျမဝငျစားတာဆိုရငျ ဘာဆကျလုပျကွမလဲ။ သငျ့အနနေဲ့ ရှေးခယျြရတော့မှာပါ။ ဒီလို ငွငျးပယျခံရတာက သငျ့ကိုပွိုလဲသှားစမှောလား ဒါမှမဟုတျ ဒီအရှုံးကနေ စိတျဓာတျခှနျအားရယူပွီး အောငျမွငျသညျအထိ ကွိုးစာမှာလား။ တဈခုခုကိုတော့ ရှေးခယျြရမှာ ဖွဈပါတယျ။
သငျ ကရြှုံးခဲ့ရပမေယျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အားပေးပွီး ဆကျလုပျမယျဆိုရငျ သငျဟာ တကယျ့ကြှမျးကငျြပညာရှငျ ဖွဈလာတာပါပဲ။ စှနျ့ဦးလုပျငနျးရှငျတိုငျးဟာ ဒီလိုအခိုကျအတနျ့ကို ဖွတျကြျောရပါတယျ။ ငွငျးပယျခံရမှုဟာ လကျလြှော့အရှုံးပေးလိုကျရမယျ့ အခြိနျမဟုတျပါဘူး။ ဒီအခိုကျအတနျ့ကပဲ သငျ့ကိုယျသငျ တကယျ့ကြှမျးကငျြပညာရှငျလား အပြျောတမျးသမားလားဆိုတာကို ကှဲပွားခွားနားသှားစမှောပါ။
သငျထုတျလုပျရောငျးခတြဲ့ ထုတျကုနျတဈခု ဒါမှမဟုတျ ၀နျဆောငျမှုတဈခုကို ၀ယျယူသုံးစှဲမယျ့သူ မရှိဘူးဆိုရငျ သငျ့အနနေဲ့ ဆကျပွီးစောငျ့ကွညျ့မလား၊ လကျလြှော့အရှုံးပေးလိုကျမလား၊ ဒါမှမဟုတျ မေးခှနျးတှေ စ မေးမလား ရှေးခယျြဆုံဖွတျရတော့မှာပါ။ သငျ့ရဲ့ စြေးနှုနျးက အဆငျမပွနေတောလား၊ ထုတျပိုးမှုပုံစံက ထုတျကုနျအရညျအသှေးကို ဖျောပွနိုငျစှမျး မရှိတာလား စတဲ့ သငျ့တျောမယျ့မေးခှနျးတှနေဲ့ အခွားဘာပွဿနာရှိလဲဆိုတာကို လကျလီသမားတှေ၊ ၀ယျယူသုံးစှဲမယျ့သူတှကေို မေးမွနျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ထငျမွငျသုံးသပျခကျြတှကေ တကယျ့ကိုအရေးကွီးပါတယျ။ ဒါကို ရအောငျယူနိုငျရပါမယျ။ ဒါမှသာ ဘယျလိုပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျဖို့လိုအပျနတေယျဆိုတာကို သိနိုငျမှာပါ။
သငျ့အနနေဲ့ အခှငျ့အရေးရခဲ့ပမေယျ့ ရငျးနှီးမွုပျနှံသူတှေ ဒါမှမဟုတျ တှဲဖကျလုပျငနျးရှငျတှကေို မဆှဲဆောငျနိုငျဘူးဆိုရငျလညျး ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာကို အဖွရှောရမှာပါ။ သငျ ဘာတှမှေားသှားလဲ။ သငျ မအောငျမွငျရတဲ့နောကျကှယျမှာ အကွောငျးရငျးတဈခုရှိနမှော သခြောပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ တငျပွမှုက ကွာလှနျးသှားတာလား၊ သငျ့စိတျကူးကို တငျပွပုံမမှနျလို့လား၊ ဒါမှမဟုတျ မှနျကနျတဲ့ ရငျးနှီးမွုပျနှံသူကို မတှလေို့လား စတာတှကေို ထိုငျပွီး သုံးသပျရမှာပါ။ ပွီးမှ လိုအပျတဲ့ ဆောငျရှကျခကျြကို လုပျဆောငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
အငွငျးခံရမှုကွောငျ့ လကျလြှော့အရှုံးမပေးဘူးဆိုရငျ သငျက ကြှမျးကငျြပညာရှငျတဈယောကျဖွဈလာပါပွီ။ ဒီအခကျြက တကယျကို ရိုးရှငျးပါတယျ။ အငွငျးခံရတာကို လကျခံပါ။ သငျ့ကိုယျသငျရော အခွားလူတှကေိုပါ ဘာကွောငျ့ ဘယျလိုဖွဈရတာလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှေ အမြားကွီးမေးပါ။ စဉျးစားပါ။ ပွီးရငျ လမျးကွောငျးသဈ ခမြှတျပါ။ ဒီလောကျဆို ရပါပွီ။ လုပျနိုငျမှာပါ။
အောငျမွငျသူတိုငျးလောကျနီးပါဟာ ဆိုးဆိုးရှားရှားရှုံးနိမျ့မှုတှေ ကွုံခဲ့ဖူးပွီး ဒီအရှုံးကိုပဲ ဆုတံဆိပျတဈခုအဖွဈ လကျခံနိုငျသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ ကရြှုံးမှုနဲ့ အောငျမွငျမှုဟာ ဒှနျတှဲနတေတျပါတယျ။ တဖကျသတျအောငျမွငျတဲ့ ဇာတျလမျးတှေ မရှိပါဘူး
ဒီတော့ အငွငျးခံရတာက သငျ့ကိုကရြှုံးစရေမှာလား စိတျဓာတျခှနျအားရစမှောလား သငျကိုယျတိုငျပဲ ဆုံးဖွတျလိုကျပါ။
Previous: ပျိုမေတို့ နှလုံးသားကို စတင်လှုပ်ခါစေနိုင်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့အချက်(၈)ခု
Next: အောင်မြင်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခု